Gnome Izinkuni | Casino UK
Gnome Izinkuni ingenye best khulula Slots inthanethi ezikhishwe Rab Cat. It possesses imiklamo umxhwele nasesimweni sengqondo. Lapha abadlali ungavakashela ehlathini aluhlaza futhi serene, futhi ungakwazi futhi uthole ezinye onqobayo enkulu inqubo. Lokhu best khulula Slots game online iyatholakala kuwo wonke amadivayisi, and is playable from a minimum bet of £0.25 upto a maximum bet of £50.00. Senziwa Gameplay obuhlakani ezimbili esiphawulekayo izici ibhonasi.
Woza Futhi Joyina best khulula Slots inthanethi!!
Lokhu slot iza 5 itolitji, 3 imigqa 25 paylines okungaguquki, futhi lezi itolitji ziqukethe ezinye izinto kahle animated. It isethwe kokukhuluma ngalezi zimo obonisa ihlathi elihle eligcwele izihlahla, nezimiso, toadstools.
Ayanda izimpawu ukubaluleka zihlanganisa rat usetshenziswe, incwadi, a cauldron, a Gnome kanye green and pink umbala imihlobiso. Futhi, ngu lokubikezela 5 ka Gnome izimpawu phezu paylines, abadlali izozuza 10 izikhathi esigxotsheni zabo Imininingwane. Ngokunjalo, 4 ukusebenzisa isitayela izimpawu anemibala namaphunga ahlukahlukene njenge-yellow, iwolintshi, eluhlaza okwesibhakabhaka zibhekwa njengemikhiqizo amagugu aphansi.
Ngaphezu kwalokho, izimpawu ezimbili zasendle lokhu best khulula inthanethi Slots umdlalo, kukhona Wild kanye Wild × 2. Uyothatha isikhundla sabo bonke ezinye izimpawu ngaphandle Mahhala osebenzisa chitha uphawu, ukuze zakha inhlanganisela ngokuwina. I RTP kuyinto 96.16%.
Inenzuzo Ibhonasi Izici Gnome Izinkuni!
Amatshwayo ezimbili zasendle lokhu best khulula inthanethi Slots umdlalo, benomthwalo amakhono afanayo, futhi ivele uma kuphela itolitji 2 ukuze 5. futhi, noma nini lapho kwenzeka, abadlali ukuthola spin khulula bese endle shift 1 isikhundla maqondana kwesokunxele. Futhi, le nqubo uzoqhubeka kuze zasendle ifinyelela esondweni elilodwa. Nokho, uma isibalo esengeziwe wilds zenzeka phakathi nalesikhathi sokuphela, ke osebenzisa free uyokulwa.
Lesi sici bazobuyekezelwa senziwa lokubikezela 3 noma ngaphezulu Mahhala osebenzisa ahlakaze imifanekiso, noma yikuphi itolitji. Manje abadlali abayoyithola 10 osebenzisa free ekuqaleni. Futhi, the wilds nokuzula izovela kunoma iyiphi itolitji ngalesi round, ukuze kwandiswe isibalo osebenzisa. Ngaphezu kwalokho, osebenzisa ngaphezulu bazobuyekezelwa senziwa lokubikezela 3 noma chitha imifanekiso ngaphezulu kuphi umbono.
Lokhu best khulula Slots inthanethi kuyinto eyodwa kahle ezakhiwa Rab Cat. It has ephezulu definition ihluzo, imiklamo ezibukwayo ngisho isici ukuzidlalela. Lokhu slot game inikeza enengqondo udlala isipiliyoni, futhi abambalwa onqobayo enhle. Ngenxa iziqondiso zalo okulula ukulandela, Gnome Izinkuni ululama kahle phakathi slot abalandeli emhlabeni wonke.